Michael Owen oo saadaaliyay wadanka laga dajin doono koobka Champions League…(Italy, England mise Spain?) – Gool FM
Michael Owen oo saadaaliyay wadanka laga dajin doono koobka Champions League…(Italy, England mise Spain?)
Dajiye December 18, 2019
(Yurub) 18 Dis 2019. Xiddigii hore xulka qaranka England ee Michael Owen ayaa sheegay in isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League si aad ah loogu adkeeyay Real Madrid maadaama ay kahor imaanayaan kooxda Manchester City, isagoo tilmaamay inuu yahay kulanka ugu adag ee wareega 16-ka.
Kaddib isku aadkii wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League ee la sameeyay waxaa isku beegmay kooxaha Manchester City iyo Real Madrid, waana kulanka ugu adag ee wareegan.
Yeelkeede, kulanka lugta hore ayaa wuxuu ka dhici doonaa garoonka Santiago Bernabue 26-ka Febraayo, halka lugta labaad lagu ciyaari doono Etihad Stadium 17-ka bisha Maarso ee 2020.
Michael Owen oo ka hadlay aragtidiisa ku aaddan isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League, iyo kooxda uu arko inay ku guuleysan karto ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa in ku guuleystaha Champions League xilli ciyaareedkan ay mar kale noqon doonto koox Ingiriis ah”.
Intaas kaddib wuxuu si qoto dheer kaga hadlay kulanka dhex mari doono kooxaha Real Madrid iyo Manchester City wuxuuna yiri:
“Manchester City ma qaadaneyso waqti fiican xilli ciyaareedkan, laakiin waxay isku dayeysaa inay gaarto heerkeedii ugu fiicnaa isla markaana ay dib u soo noolaato”.
“Real Madrid sidoo kale kuma jirto heerkeedii ugu fiicnaa, laakiin waxaan arki doonaa laba qeybood kala duwan oo ah kooxaha Real iyo City bisha Febraayo”.
“Waa isku aad adag, kulankan waa kan ugu adag ee wareega 16-ka, haddii aan qeyb ka ahaan lahaa koox kasta waxaan jeclaan lahaa inaan ka fogaado Manchester City, marka ay xaalad wanaagsan ku jirto way adag tahay in la joojiyo”.
“Waxaan ku riyoon jiray inaan ka garab ciyaaro Zidane” – Pep Guardiola
Guardiola oo sharaxaad ka bixiyay aragtidiisa ku aadan in Mikel Arteta uu ka tagayo Manchester City